November 2019 – Gandaki Chhadke Nepal
एन्ड्रोइडमा सु’रक्षा कमजोरी पत्ता लगाउनेलाई गुगलले इमान दिने गरेको छ। जसलाई ‘बग बाउन्टी प्रोग्राम’ भन्ने गरिन्छ। यस्तो इनाम अधिकांश टेक कम्पनीहरुले दिने गर्दछन्। जसमा सु’रक्षा कमजोरी पत्ता लगाउन नाम चलेका ह्या’करहरुलाई जानाजान आफ्नो डिभाइस ह्या’क गर्न लगाइन्छ। गुगलले पहिलो पटक एन्ड्रोइडको लागि ‘बग बाउन्टी प्रोग्राम’ ल्याउँदा अधिकतम इनाम ३८ हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिव ४३ […]
काठमाडौं । मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका– ८ का वडाध्यक्ष डिभी परेर अमेरिका गएपछि सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । चुनाव जितेका वडाध्यक्ष अमेरिका गएपछि विगत सात महिनायता वडा कार्यालय नेतृत्वविहीन बनेको छ । समयमै राजीनामासमेत नआएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचनसमेत नहुने अवस्था रहेको जनाइएको छ । वडा सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर […]
November 13, 2019 News DeskLeaveaComment on सीमानामा थप १ सय बढी ‘बीओपी’ थपिँदै
काठमाडौं, कार्तिक २७ । सरकारले भारत र चीनसँग सीमाना जोडिएका स्थानको सुरक्षालाई सशक्त बनाउने गरी थप बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट बीओपी राख्ने गरी सघन तयारी अघि बढाएको छ । चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा समेत सरकारले पहिलोपटक स्थायी बीओपी राखेर सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउनेगरी तयारी गरेको हो । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक […]
नेपालमा पहिलो पटक Sastodeal ले Nokia 7.2 बेच्न शुरू गर्यो केवल रु २३,९९९, विश्वव्यापी सस्तो मूल्य । उदासीन नोकिया ट्युन याद आयो? नयाँ Nokia 7.2 विश्वव्यापी सस्तो मूल्य मात्र २३,९९९ मा Sastodeal मा उपलब्द छ । हो! तपाईंले सही पढ्नुभयो, रु ३३,९९९ एमआरपी बाट मूल्य घटेको छ। यो स्मार्टफोन नेपालमा पहिलो पटक विश्वकै सबै भन्दा […]
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विषयलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने बताएका छन् । भारतले पछिल्लो समय नेपालको विवादास्पद क्षेत्र कालापानी आफ्नो नक्सामा समेटेपछि अहिले विवाद चुलिएको छ । राजनीतिक दल देखि सर्वसाधारणसम्म यसले हलचल ल्याएको छ । राजधानी लगायत देशका विभिन्न भू–भागमा दिनहुँजसो प्रदर्शन […]
November 11, 2019 November 11, 2019 News DeskLeaveaComment on कमला घिमिरेले रेकर्ड गराईन पहिलो गित…गितको बोल…हेर्नुहोस् पुरा हेर्नुहोस्।
सम्राट भट्टराई धादिङ्ग,कमला धिमिरे धादिङ्ग जिल्ला को बिकट गाँउमा जन्मेकी एक छोरी हुन।उनि मात्र ११ बर्षकी भइन हिजो को दिनहरुमा कमला धिमिरे को नाम छरछिमेकमा मात्र चिनिन्थिन् भने उनको अतभुत प्रतिभाको कारण आज संसारमा रहेका सम्पुर्ण नेपालीहरुले चिन्दछन् । उनको प्रतिभाको कारण देशै भरि बिभिन्न ठाँउमा उनको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। उनिमा यस्तो अदभुत […]
कालापानी र लिपुलेकलाई लिएर नेपाली सेना एक्सनमा ! नेपाली भूभागको रक्षामा नचुक्ने
November 11, 2019 November 11, 2019 News DeskLeaveaComment on कालापानी र लिपुलेकलाई लिएर नेपाली सेना एक्सनमा ! नेपाली भूभागको रक्षामा नचुक्ने
भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे जंगीअड्डामा गहन छलफल भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा पारेको विषयमा विभिन्न दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणबीच छलफल बढेपछि नेपाली सेनाले चासो देखाएको हो। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली भूभागको रक्षामा सुरक्षाकर्मी चुक्न नहुने भन्दै अन्य तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाएका हुन्। […]